अब फुटबल खेल्दिनँ
सराेज तामाङ सोमबार, भदौ १५, २०७७, ११:४५
काठमाडौं- संघर्ष र प्राप्तीका कथाहरु धेरै लेखिएका छन्। मुस्किलमा उठेका हातहरु सुन्दर लाग्छन् नै। दुःखमा पनि बढिरहेका पाइलाका तारिफ हुन्छन् नै। तर रोकिनुपरेका समयको वेवास्ता किन हुन्छ? छाडेर जानेहरु किन कहिल्यै राम्रो लागेनन्? चाहे बाध्यता जेसुकै होओस्।
देशमा रहँदा उनीहरु दुःख बोल्दैनन्। बोलि दबाइने समाजमा नबोलिएका कुराहरु झनै छोपिन्छन्। यसैले दबिएका ती उकुसमुकुस पलायनसँगै बाटो खोज्छन्। निस्कन्छन्। अहिले फुटबल खेलाडी हेमन गुरुङलाई ठीक त्यस्तै भइरहेको छ। ती कठीन दिनहरुले झस्काइरहन्छ।
दुःखपछि सुख, रातपछि दिन आउँछ भन्नु उनका लागि काल्पनिक बिम्बबाहेक केही भएन। सुखको दिनका लागि सयौँ दुःखका रातहरु कटे तर उज्यालो देखिएन। प्रश्न बाँकी थियो त दुःखको पर्वाह नगरी राष्ट्रिय खेलाडीको गर्व गरिरहने कि सुखद भविष्य रोज्ने? उनले मुस्किलले दोस्रो विकल्प रोजे र देश छाडे।
खेल्दाखेल्दै मैदान छाड्नुको दुःख खेल्नेहरुलाई नै थाहा छ। बाहिर देखिएकोे उचाइले भित्रभित्र गहिराइमा पार्दै लगेपछि विकल्पको खोजि स्वभाविक बनिदिन्छ। जहाँ बाध्यता बनिदिन्छ विदेशिनु। प्रश्न उठ्छ, यहाँ नै यत्तिका संघर्षमा बाँचिरहेछन् त केही किन देश नै छाड्छन्? विकल्प देशमा नै पनि त हुन्छ।
यसको उत्तर कसैसँग पनि छैन। फुटबल मैदान छाडेर अस्ट्रेलिया पुगेका हेमनसँग पनि। तर उनलाई यत्ति थाहा छ, हामी अगाडि देखिएका केही अनुहारका आधारमा पछाडि भएकाको अवस्था बुझ्न सक्दैनौँ। नेपाली फुटबलले संघर्षबाट आफै उठेका किरण चेम्जोङ र रोहित चन्द देखाएर हेमनहरुको वेवास्ता गरिरहनु मिल्दैन।
हेमन अहिले अस्ट्रेलियामा पढाइ अगाडि बढाउने प्रयासमा छन्। केही समयको कक्षा र बाँकी साथीहरुसँग फुटबलमा नै छन् उनी। कोरोना माहामारीका कारण कठीन बनेको समयमा काम पाएका छैनन्। ‘केही गर्ने भनेको कोरोना भाइरसको कारण मिलेको छैन। विकास गौचन प्रशिक्षक र हिमालयन शेर्पा क्लबमा खेल्दाका साथीहरुसँग अहिले बसिरहेको छु’ उनले सुनाए।
खेल्दा खेल्दै छाडे
हेमन अस्ट्रेलिया गएको आठ महिनाजस्तो भयो। सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग खेल्दा खेल्दै छाडेर उनी विदेशिए। हेमन नेपाली समुदायले गर्ने कार्यक्रममा सहभागिता हुन अस्ट्रेलिया गएका थिए। त्यसपछि नेपाल फर्किएनन्। उनले पहिल्यै भनिसकेका थिए, अब म फुटबल खेल्न नेपाल फर्किंदिनँ।
हेमनले २०७६ सालमा भएको ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्र क्लबबाट ब्रिगेड ब्वाइज क्लबविरुद्धको पहिलो खेल मात्रै खेले। त्यसपछि मैदानमा देखिएनन्। न त उनको खोजि नै भयो। हेमन भन्छन्- ‘को कहाँ गयो? के गर्दै छ? मर्यो कि बाँच्यो? एन्फालाई मतलब नै हुँदैन। खेलाडी बाँच्ने आधार नै छैन। त्यसैले छाडे।’
हेमनलाई रिस पनि छ, उत्तिकै पीडा पनि। सरकार र एन्फाले खेलाडीको भविष्य नहेरेकोमा उनलाई रिस छ। आफूले फुटबल छोड्दाको पीडाले पनि उत्तिकै सताउँछ। खेलिरहेका खेलाडीलाई कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ताले सताउँछ भने अनेक सोच आइनै हाल्छन्।
सरकार फेरियो। एन्फा फेरियो। तर खेलाडीको अवस्था फेरिएन। समस्या थपिँदै जाँदा कति खेलाडीले बीच बाटोबाटै फुटबलबाट पाइला मोडेका छन्, कतिले पछुताउँदै छाडेका छन्। फुटबलमा जिन्दगी बिताइसकेकाको पनि प्रश्न हुन्छ, आखिर के भयो त? अहिले पनि देशलाई स्वर्ण पदक दिलाएका खेलाडीहरु देशमा कुटो कोदालोदेखि विदेशमा श्रम बेचिरहेका छन्।
फुटबलमा केही नहुने देखेरै धेरै खेलाडीहरु अन्तै आफ्नो भविष्य खोज्दै छन्। ती मध्येका एक हुन् हेमन। ‘२-३ वर्ष अगाडि नै खेलेर केही हुँदैन भन्ने लागेको थियो। फुटबलबाहेक अरु विकल्प हेर्दै थिएँ। जे गरे पनि एन्फालाई ज्यु-ज्यु गरेर बस्नु पर्छ’, हेमन थप्छन्, ‘जिन्दगीभर फुटबल खेल्यो खेलाडीले पाउँछ चाहिँ के? नेपालमा खेलाडीले जति गरे पनि हुने केही होइन। बाँच्ने आधार नै छैन। खानु बस्नु नै धौ धौ हुन्छ।’
यहाँ अन्धकार छ
नेपाली खेलाडीका लागि उज्यालोभन्दा बढी अँध्यारोले सताइरहेको छ। देखिने उज्यालोमा पनि छोपिएको अन्धकार नै अघि आउँछ।
एन्फामा शक्ति फेरियो, पदाधिकारी फेरिए। तर खेलाडीलाई कहिल्यै अविभावकत्व महसुस भएन। हेमनकै कुरा सुन्ने हो भने त- बोलूँ, बोल्न पाइँदैन। आलोचना गरे टिम बाहिर। तब किन गर्नु प्रतिकार? बरु ज्यु ज्यु गरेर टिममा परिरह्यो।
देशमै भएका धेरै खेलाडी पनि एन्फाप्रति सन्तुष्ट छ्रैनन्। तर बोल्न सक्दैनन्। बोल्नु खेल गुमाउनु भएपछि बोल्नु पनि पो किन?
‘खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित कहिल्यै छैन। किरण र रोहित दाइको उदाहरण दिएर मात्रै हुँदैन। राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने सबै खेलाडीको भविष्य अन्धकारमा धकेलिदिएको छ’, विदेश पुगेपछि हेमन खुलेर बोले।
एन्फाप्रति उनको कुनै अपेक्षा छैन। पहिलेदेखि नै एउटै ताल भएपछि एन्फामा आशा राख्नु बेकार भएको उनको तर्क छ। ‘अझै म फुटबलमा लागिरहेको भए ४-५ वर्ष खेल्थेँ होला। तर त्यसपछि गर्ने के? म अझै खेलिरहेको भए खेलाडी जीवनपछि खाडी मुलुक जाने स्थिति आँउथ्यो। बेलैमा सोचेछु जस्तो लाग्छ’ उनले भने।
लामो समय राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका एक खेलाडीलाई नेतृत्वविरुद्ध यतिका वितृष्णा पैदा हुनु पछाडिको कारण के? वर्तमानमा भोगेको वेवास्ता, असुरक्षा र भविष्यप्रतिको डरबाहेक अरु के होला र।
राष्ट्रिय टिममा रहँदा एन्फाले पुरुष खेलाडीलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिन्छ। क्लबले लिग अथवा मोफसलको प्रतियोगिता हुँदा टिममा अनुबन्धित गर्छ। खेलाडीअनुसार त्यसको रकम फरक छ। अरु समय फुटबल खेलाडी त्यतिकै बस्छन्। एक त आर्थिक संकटमा परेको नेपाली क्लबले खेलाडीलाई न्युन पारिश्रमिक दिएको छ। त्यो पनि समयमै पाउँदैनन्। आफ्नो खर्च धान्न खेलाडीलाई मुस्किल पर्छ।
‘अनिल (गुरुङ) दाइले देशको लागि कति खेल्नुभयो? खोइ त व्यवस्था? विराज दाइको त्यस्तै छ। उहाँले आफ्नै कप्तानीमा देशलाई तीन वटा उपाधि दिलाउनु भयो तर एन्फा खोइ त?’, एन्फालाई प्रश्न गर्दै हेमन भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्ति विकास भएको छ कि, एन्फामा धाइरहनु पर्ने। गुड मर्निङ सर.. गुड मर्निङ सर भन्दै क्रिपावाद गरिरहनु पर्ने अनि मात्रै यसो अलिअलि पाउने हो। जो एन्फाविरुद्ध जान्छ त्यसको जिन्दगी गयो खेर।’
नेपाली फुटबलमा जोडिएको हेमनसँग त्यस्ता थुपै्र यादहरु छन्। जसले उत्साह भन्दा बढी निराश बनाउँछ। धेरै फुटबल खेलाडी दिक्दार छन्। आफ्नै दुनो सोझ्याउने एन्फा पदाधिकारीको प्रवृत्तिबाट हैरान भएका छन्। दसैँमा घर जाने बेलामा पैसा नभएकोदेखि एन्फाले दिएको कहिल्यै पूरा नहुने आश्वासनसम्म सुनाए हेमनले।
‘नेपालमा भएका खेलाडीले बोल्न सक्दैनन्। बोल्नै दिँदैनन्। सबै आफ्नै दुनो सोझाउन मात्र एन्फामा आउँछन्। खेलाडीहरु दिनदिनै मरेको कसैले देख्दैन। एक हजार देखि १५ सय भन्छ एक दिनको भत्ता। तर दुई-तीन महिनापछि आउँछ त्यो पनि १० हजार मात्र, बोल्यो कि पोल्यो।’
त्यो क्षण सम्झिँदा खेलौं लाग्छ
हेमन होचा कदका छरिता खेलाडी हुन्। करिब पाँच वर्ष राष्ट्रिय फुटबल टिमको मिडफिल्डरको रुपमा मैदानमा देखिएका हेमन अब सायदै उसैगरी देखिने छन्। यसपछिको कारण कसले खोजेको छ? राष्ट्रिय टिमबाट खेलेका फुटबलरहरु कहाँ के गर्दै छन्?
२६ वर्षका हेमनले सन् २०१५ मा बंगलादेशविरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेलमा राष्ट्रिय टिम डेब्यु गरे। २०१५ मै भारतमा हुने साफ च्याम्पियनसिपको लागि तयारी स्वरुप नेपालले बंगलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेदेखि पाँच वर्ष हेमन टिममा रहिरहे। उनले राष्ट्रिय टिमबाट अन्तिम खेल २०१९ मा मलेसियन क्लबविरुद्ध खेलेका थिए। सायद उनको यो नै अब अन्तिम खेल हो।
हेमनले नेपाली फुटबल टिममा डेब्यु गरेपछि तीन ठूला उपाधि नेपालले जित्यो। ऐतिहासिक सफलता पायो। नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता दिलाउन हेमनको पनि मुख्य भूमिका थियो। बंगबन्धु गोल्डकप, १२औं साग खेलकुद प्रतियोगिताको फुटबलमा स्वर्ण र एएफसी सोलिडारिटी कपको उपाधि नेपालले जित्यो।
लगातारको जितले टिमका सबै खेलाडी हिरो बने। र्याली निस्क्यो। खेलाडीको जीवन कायापलट हुने अनुमान भए। तर अहिले त्यही खेलाडीले फुटबललाई छोडेर अर्कै पेसामा भविष्य खोजिरहेको छ। त्यो पनि समुद्र पारीको देशमा।
नेपाललाई तीन ठूला उपाधि दिलाएको स्मरण गर्दै हेमन भन्छन्, ‘त्यो क्षण सम्झिँदा खेलौँ झैँ लाग्छ। तर सरकार, एन्फा, पदाधिकारी र प्रशिक्षकको ताल देख्दा फुटबल छुन पनि मन लाग्दैन।’
नेपालमा जो प्रशिक्षक टिकिरहे। उनीहरु कहिल्यै अब्बल भएनन्। जो केही गर्न भनेर आए उनीहरुलाई एन्फाले टिक्न दिएन। एन्फाले नेपाली फुटबलको विकास गर्न राम्रो प्रशिक्षक ल्याउन सकेको छैन। नेपालमा आएका प्रशिक्षकको मानसिकता नै कम गोल खाएर हार्ने भएको हेमनको दाबी छ।
‘हाम्रोमा प्रशिक्षकले तल्लो स्तरको मानसिकता बनाएको हुन्छ। रोक्ने, रोक्ने र रोक्ने नै हो हाम्रो रणनीति। कम गोल खाएर हार्ने लक्ष्य हुन्छ। यस्तो पनि हुन्छ?’, हेमन प्रश्न गर्दै थप्छन्, ‘खेल जित्नलाई खेलिने हो। सधैँ बराबरीको सोच कहाँ हुन्छ? चाहे त्यो बलियो टिम होस् या कमजोर जित्ने सोच पो हुनुपर्छ। राम्रो प्रशिक्षक नै छैन। स्तरीय प्रशिक्षक एन्फाले रुचाउँदैन। अनि कहाँबाट हुनु फुटबलको प्रगति।’
त्यसो त, हेमन अहिलेका प्रशिक्षक योहान कालिनकै प्रशिक्षण कालमा राष्ट्रिय टिमबाट बाहिरिए। यसैले पनि हुन सक्छ, प्रशिक्षकले स्तरीय प्रशिक्षण नदिएको उनको आरोप छ। जुधेर खेल्न लगाउने स्वभावको प्रशिक्षक कालिन भएको उनको ठम्याई छ। ‘प्रशिक्षक कालिनका कारण पनि मैले फुटबल छाडेँ। खेलाडीको खेलअनुसार व्यवहार भएन। सुरुमा नराम्रो लाग्थ्यो। तर फुटबल छाडेर ठिक गरेछु भन्ने भएको छ। प्रशिक्षकको कारणले गर्दा मैले आफ्नो भविष्य हेर्न पाएँ’ उनले भने।
त्यसो भए नेपालमा कस्तो प्रशिक्षक चाहिन्छ त? भन्ने प्रश्नमा हेमनको प्रतिक्रिया छ, ‘विदेशबाट ल्याइएका प्रशिक्षकमा जति ज्ञान भएका प्रशिक्षक नेपालमा पनि हुुनुहुन्छ। तर हामीलाई त सेतो छाला नै चाहिन्छ नि।’
अब सायदै खेल्छु
आफ्नो भविष्य नै फुटबलमा देखेका खेलाडि, जो फुटबल खेल्न मरिहत्ते गर्छन्, उसले अब फुटबलमा फर्किन्न भन्दा कति ठूलो हिम्मत र साहस बटुलेको होला। यी शब्दहरु मुखबाट निकाल्न कति बल परेको हुँदो हो। अनि कति पीडा पनि।
विरक्तिएर अस्ट्रेलियामा भविष्य खोज्दै गरेका हेमनको यस्तै दुःखलाग्दो सन्देश छ अनि कठोर निर्णय पनि। भन्छन्, ‘फुटबलमा फर्किन्छु भन्ने सोच छैन। मलाई आफ्नो भविष्य बनाउनु छ। देशको लागि खेल्दा खेल्दै भविष्य बिगारेँ। अब सपार्नेमा छु।’
अब फुटबल खेल्दिनँ भनिरहँदा हेमन भावुक सुनिए। स्तब्ध पनि। तर उनले भोगाइ लुकाएनन्। जे वास्तविक लाग्यो त्यही भने। उनले आफ्नो भविष्यको चिन्ता मात्रै पोखेनन्, नेपाली खेलाडीको भविष्य नै नभएको पनि सम्झिए। ‘नेपाली खेलाडीको भविष्य अन्धकार छ। यसो भनिरहँदा दुःख लाग्छ। यतिका वर्ष फुटबल खेलेँ। माया त लाग्छ। विगतका दिनहरुको याद आइरहन्छ। तर भविष्य नै नभएर अर्कै बाटो रोज्नु पर्यो।’
मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएका हेमनलाई दुई-तीन वर्ष अघिदेखि नै बाबुआमाले फुटबल छोड्न कर गरिरहेका थिए। लामो समयसम्म केही नहुने देखेपछि छोरालाई यस्तो भन्नु अस्वभाविक पनि होइन होला। आमाबाबुको चिन्ताले हेमनलाई पनि केही फरक सोच्न बाध्य पारिरह्यो।
हेमन भन्छन्, ‘धेरै आर्थिक समस्या पथ्र्यो। मेरो मात्रै हैन। प्राय सबै खेलाडीको। आवश्यकता र चाहानालाई कुल्चिएर बस्नु पर्ने बाध्यता थियो। अन्तिममा केही सीप नलागेपछि फुटबल छाडेँ अहिले दुःखी छैन।’
पहिलो अंक -
दोस्रो अंक -
तेस्रो अंक -